ko htike's prosaic collection: နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း ဖိနပ်ဖြင့် ပေါက်ခံရ
It's good .No choice to express our feelings. They deserve it... keep it up.
shameless Thein Sein and Nyan Win.
Please don't do silly, unwise things.
All those things are doing and doing by many people those living at big countries by defining themselves as politicians since long been.Nothing effective to any areas.
Supposed to mention that "Mr Thein Sein & Mr Nyant Win Please don't talk funny rubbish and childish things to world leaders." Please bring and discuss constructive and positive ideas and talks so as to change Myanmar political climate in line with current development and situations that was unprecedented in Myanmar political moves.
Such things throwing shoes, mentioning free Burma and political prisoners are very common and all we already known. Yes of course we do understand that we need after once we have one wrokable solution for Myanmar.
Please use head and mind your actions and know its affects and consequences those people reaching at important places.
World's people are monitoring what all of you are doing what.
ဟားဟား.. ခုလောက်ဆုိုရင်တော့ အမေရိကန်တွေလည်း အတုိုက်အခံတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတယ်ဆုိုတာတွေကုို နားမလည်တဲ့လူတွေဆိုတာ.. သူတုို့နုိုင်ငံတွေမှာလုို ဆန္ဒပြသမားတွေကုို ကပ်ပီး နေရာပေးခွင့်ပြုထားလုို့ မရဘူး ဆုိုတာ.. စည်းကမ်းတကျ ဆန္ဒပြမှုတွေ ခွင့်ပြုပေးထားလုို့ မရတဲ့လူတွေဆုိုတာ သိလောက်ပါပီလေ..
နုိုင်ငံရေးလောကမှာ အီရတ်လုို အစွန်းရောက်နုိုင်ငံမှာသာ ရှားရှားပါးပါးတွေ့ခဲ့ရတဲ့ တကမ္ဘာလုံး တအံ့တအောနဲ့ အဲလောက်တောင် ယဉ်ကျေးမှုနည်းရလားဟ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ လုပ်ရပ်ကုို ပုံတူကူးခဲ့တာက အတုိုက်အခံမှာတောင် သာမန်လူမဟုတ်တဲ့ မုိုးသီးဇွန်ဖြစ်နေတာတော့ လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး အားပေးရမှာပါပဲ.. ခုတော့ မြန်မာဒီမုိုအရေး အားပေးတဲ့နုိုင်ငံတွေခမျာ တစ်ခါတစ်လေ အစည်းအဝေလေး ဘာလေး ဖိတ်လုို့ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးတဲ့ အတုိုက်အခံဆုိုသူက ဖိနပ်ပေါက်ပွဲ ၀င်နေတော့လည်း သူတုို့ခမျာ အီလည်လည်တော့ ဖြစ်မယ်ထင်သား..
ဖိနပ်စွဲကုိုင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ကုိုမုိုးသီးရေ.. (အီး.. စွဲကုိုင်စရာ ရှားလုို့..) သတ္တိတကယ်ရှိရင် အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်လောက်အောင် လုပ်ကြံပါလားဗျာ.. အရမ်း မခဲယဉ်းလောက်ဖူး ထင်ပါတယ်.. ဒီအတွက်ကြောင့်မုို့ ကိုမိုးသီးရဲ့ အနာဂါတ်ဟာ ခုလုိုမျိုး သတိပေးချက်နဲ့ ပီးသွားမှာမဟုတ်ပဲ အရမ်းနစ်နာသွားနုိုင်ပေမဲ့ ရလာဒ် အကျိုးမြတ်ကတော့ ဟန်ဆောင်မဟုတ်ပဲ တကယ်မုန်းတီးတယ်ဆိုရင် ကြီးမားလှတယ်မဟုတ်ဘူးလားဗျ.. ဟဲဟဲ.. ဒီကောင်မျိုးအတွက် ငါ့ အမေရိကားရောက် ဘ၀လဲရမှာ မတန်ပါဘူးကွာဆုိုတဲ့ ဆင်ခြေမျိုးလေပေးလုို့ စားပေါက်ချောင်ဖုို့အရေး ဖိနပ်စွဲကုိုင် ဆက်လက်တုိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆုိုရင်လဲ အင်း.. အီလည်လည်နဲ့ပဲ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်ဆုိုတာ ဒီလုိုဖြစ်နေမှတော့လည်း မြန်မာအရေး နှစ်နှစ်ဆယ်.. ဘာဆန်းသလဲလေလုို့ မောင်သတိ မှတ်ထားပါမယ်ခင်ဗျ...
Once we have reached toacertain stage, we need to clear incompetent politicians or leaders at both sides. Might those have passion with political but do not have qualities.
Then please be very carefully taking care that later on, Junta will be able to bring Myanmar Refugees at USA to notorious Insein prison.
အရူးဒီမိုတွေ .... ခေါင်စဉ်ကြီးကတော့ ဦးဥာဏ်ဝင်း ကြီးပဲ ဖိနပ်မှန်လို့ ဒဏ်ရာတွေတောင်ရသွားသလို ဘာလိုလိုနဲ့ ... ။ ပြန်ကြည့်စမ်းပါဦး Video ဖိုင်မှာ .. ကားထဲမ၀င်ခင် အပြင်မှာ ရှိတုန်းကတော့ မပေါက်ရဲပဲနဲ့ ... ကားထွက်သွားပြီဆိုမှ ကားကို လှမ်းပစ်တာကြီးများ ... ဦးဥာဏ်ဝင်း ကို ဖိနပ်နဲ့ ပစ်တယ်ဆိုပြီးလျှောက်ရေးနေသေးတယ် .. ဦးဥာဏ်ဝင်းစီးသွားတဲ့ကားကို ပစ်ဆိုရင်မှ တော်ဦးမယ် ..။
တစ်စိတ်ကို တစ်အိတ်လုပ်တတ်တာ ဒီမိုစောက်ရူးတွေရဲ့ အကျင့်တွေပါလား ...။
ဘာပဲပြောပြော .. မင်းတို့တွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာကို မင်းတို့ရဲ့ ပထွေး အမေရိကန်တောင် မယုံတော့မှာတော့ အသေအချာပါပဲ..။
ဖိနပ်ကိုင်စွဲ တိုက်ပွဲဝင်ပြီး ဖိနပ်လေးတွေပါ ဆက်ပြီး ကိုက်လိုက်ပါဦး ဒီမိုအရူးတွေရေ ... ဟား ဟား ဟား ..။
အေး အရိုးကိုက် ဖိနပ်ကိုက် နေကျ မင်းတို.လို ဓါးမနောက်ပိတ်ခွေးတွေ အတွက်ထိုက်တန်တဲ့ လက်ဆောင်ကို ပစ်ပေးကြတာပဲ။ ကိုယ့်ရာထူးတည်မြဲဖို. ကိုယ်နေရာတစ်ခုရဖို.အတွက်
ဘုန်းကြီးပါမရှောင်သတ်ရဲ ဖြတ်ရဲတဲ့ အ၀ီစိသွားမယ့် မင်းတို.လိုခွေးသူတောင်းစားတွေအတွက် ကြားမှာတန်စာခံဖြစ်သွားတဲ့ ဖိနပ်တောင်သနတယ်။ အထက်လူကြီးကိုဖါးဖို.အတွက် comment တွေ
မနေနိုင်မထိုင်နိုင် လိုက်ပေးနေတဲ့ စစ်ခွေးကောင်တွေ မင်းတို.ဖါသာ မင်းတို. စောက်ရှက်မရှိ အထက်လူကြီးမယားရဲ. ထမိန်ကို အေးအေးလျှော်ကြ။ ကျက်သရေမရှိတဲ့ မင်းတို.မျက်ခွက်တွေ သူများ website
တွေလိုက်ကြည်.နေကြတာ website တွေသနတယ်။
"You are not paid to work hard. In fact, you are paid for effort at all. You are paid for results. It's not what you do; it's what you get done."
"You are not paid to work hard. In fact, you are not paid for effort at all. You are paid for results. It's not what you do; it's what you get done."
Be smarter, not need to harder.